Khasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose oo kordhay - Awdinle Online
Khasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose oo kordhay
Waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay dagaal Ciidamo ka tirsan millateriga Soomaaliya iyo Al-Shabaab ku dhex-maray degaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose ee Maamulka Koonfur Galbeed.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dhacay degaanka Buulalow oo ku yaalla inta u dhaxeysa degmada Afgooye iyo Walanweyn, waxaana dagaalka ku dhintay Saraakiil iyo Askar ka tirsan Ciidamada Dowladda, sida ay sheegeen dadka degaanka lagu dagaalamay.
Wararka la helay ayaa waxaa ay sheegayaan in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 15 Askari oo ka tirsan Ciidamada dowladda oo ay ku jiraan laba Sarkaal oo Caan ka ahaa Gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana saraakiil Ciidan dhankooda ay sheegeen in Al-Shabaab ay dagaalka khasaaro ku gaarsiiyeen.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamada Dowladda oo wata Gaadiidka dagaalka noocyadooda kala duwan oo ka baxay fariisin ay ku leeyihiin degaanka warmaxan ay howlgal ka sameeyeen inta u dhaxeysa Walanweyn iyo Afgooye, waxaana dad halkaasi ku sugan ay sheegeen inay arkayeen Ciidamada oo baaritaano ku sameynaya Gaadiidka wadadaasi ku safra.
Taliska Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed weli kama hadlin weerarka ka dhacay degaanka buuulalow ee lagu dilay Saraakiisha & Ciidamada faraha badan oo ka tirsan kuwa Millateriga Soomaaliya, kaddib weerar gaadmo ahaa oo ay kala kulmeen Al-Shabaab.